Thu, Feb 27, 2020 at 4:52pm
काठमाडौं, २८ माघ । साताकाे तेस्राे दिन मंगलबार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दाेहाेराे अंकले बढेकाे छ ।आज नेप्से परिसूचक १७.११ विन्दुले बढेर आज एक हजार ३४१.३८ मा पुगेको हाे । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.७५ ले बढेर २८५.३७ मा पुगेको छ । नेप्से उकालो लाग्दा त्यसको प्रभाव कारोवार रकममा समेत परेको छ । कूल १७५ कम्पनीको ३९ लाख ९६ हजार ८७७ कित्ता शेयर..
काठमाडौँ, १६ माघ धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उकालो लागेको छ । लगातार उकालो लाग्ने क्रममा रहेको नेप्से परिसूचक आज झण्डै २० अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अनुसार नेप्से १९.५१ विन्दुले बढेर एक हजार ३२५.३८ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.५७ ले बढेर २८१.७६ मा पुगेको छ । नेप्से उकालो लाग्दा कारोवार रकममा..
काठमाडौँ, १५ माघ धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से ०.२७ अंकले घटेर १ हजार ३०५.८८ मा थामिएको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४९ अंकले घटेर २७८.१९ मा पुगेर रोकिएको छ । आज कुल १७६ कम्पनीका २८ लाख ७८ हजार ४५२ कित्ता शेयर रु एक अर्ब २९ करोड ३७..
काठमाडौँ, १४ माघ धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ५.५२ अङ्कले बढेर एक हजार ३०६.१५ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक भने झिनो अङ्कले गिरावट आएको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४८ अङ्कले घटेर २७८.६७ मा पुगेको छ । आज कुल १७८ कम्पनीका ३७ लाख ३९ हजार ३९७ कित्ता..
काठमाडौँ, १३ माघ आइतबार दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झण्डै २४ अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से २३.९५ विन्दुले बढेर एक हजार ३००.६२ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४.५३ ले वृद्धि भई २७९.१५ मा पुगेको छ । नेप्सेमा उच्च विन्दुको सुधार देखिँदा कारोवार रकममा भने त्यसको प्रभाव देखिएन ।..
काठमाडौँ, १२ माघ धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै २१ अङ्कले ओरालो लागेको छ । साताको पहिलो दिन आज नेप्से २०.७९ विन्दुले ओरालो लागेर एक हजार २७६.६८ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ४.१० ले घटेर २७४.६२ मा पुगेको छ । नेप्सेको ओरालो यात्रासँगै कारोवार रकममा समेत गिरावट आएको छ । कूल १७४ कम्पनीका २६ लाख ६० हजार..
काठमाडौँ, ९ माघ धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको नेप्से परिसूचक झण्डै १६ अङ्कले घटेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १५.९५ विन्दुले घटेर एक हजार २९७.४७ मा झरेको छ । एक हजार ३०० को विन्दुमाथि पुगेको बजार आजको ओरालो यात्रासँगै एक हजार २०० को विन्दुमा झरेको हो । यस्तै..
काठमाडौँ, ७ माघ धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले वृद्धि भएको छ । सोमबार २६ अङ्कले घटेको बजारमा आज सामान्य सुधार देखिँदै नेप्से ३.३६ विन्दुले बढेर एक हजार ३२०.४७ मा समेटिएको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९० ले बढेर २८४.४३ मा पुगेको छ । झिनो अङ्कले नेप्से उकालो लागे पनि कारोवार रकम भने करीब डेढ अर्ब नाघेको छ । स्टकका अनुसार कूल..
काठमाडौँ, २ माघ सेयर खरिदबिक्रीमा रौनकता थपिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । बिहीबार पौने २ घन्टामै आधा अर्ब (५० करोड) रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भइसकेको छ । नेप्से सूचक पनि दोहोरो अंकले बढेर १३०० विन्दु आसपासमा रहेको छ । नेप्सेले दिनहुँ नयाँ उचाई बनाउँदै जानु, कारोबार रकममा निरन्तर सुधर हुनु लगायतका कारण सेयर बजारको आगामी दिनहरु निकै सकारात्मक हुने अनुमान गर्न..
बुधबार, माघ १, २०७६ साल
काठमाडौँ, १ माघ पुस मसान्तमा घटेको शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक माघको पहिलो दिन २० अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक २०.८५ अङ्कले बढेर एक हजार २८४.२३ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४.६८ अङ्कले बढेर २७८.९७ मा पुगेको छ । परिसूचक २० अङ्कले बढ्दा कारोवार रकम भने ९० करोडमा समेटिएको छ । स्टकका अनुसार आज..
काठमाडौं, १ माघ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नै पैसाले कारोबार गरी पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउन लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज 'नेप्से' को २७औं वार्षिक साधारणसभामा उनले बैंकको ब्याजदर कहिले घट्ला, बैंकमा कहिले तरलता आउला अनि शेयरबजार बढ्ला भनेर रमिता नहेर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘तर छिटो–छिटो कारोबार गर्दा आफ्नो विवेकचाहिँ नगुमाउनु होला ।’ शेयरमा लगानी गर्दा..
काठमाडौँ, २९ पुस गत बुधबारदेखि वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक आज भने ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ७.४८ अङ्कले घटेर एक हजार २६३.३८ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि २ अङ्कले ओरालो लागेर २७४.२८ मा पुगेको छ । परिसूचक घटे पनि कारोवार रकम भने अर्बमाथि छ । स्टकका अनुसार आज १८३ कम्पनीका..
काठमाडौँ, २८ पुस धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । आइतबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको बजारले आज पनि सोही लय पछ्याएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक १५.१४ विन्दुले बढेर एक हजार २७०.८६ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.५५ ले बढेर २७६.२८ मा पुगेको छ । नेप्सेको उकालो यात्रासँगै कारोबार..
शनिबार, पौष २६, २०७६ साल
काठमाडौँ, २६ पुस साताभर नै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकले नयाँ उचाइ हासिल ग¥यो । लगातार ओरालो लागेको बजारले करिब १०० बिन्दु माथि पुग्यो भने कारोवारमा समेत नयाँ उचाइ हासिल ग¥यो । लगानीकर्तामा एक प्रकारको उत्साह जगाउन सफल साताको रुपमा यस हप्ता कायम रह्यो । साताभर कूल १७९ कम्पनीका एक अर्ब ४६ करोड ८२ हजार ५५३ कित्ता शेयर रु चार..
काठमाडौँ, १४ पुस आइतबार करिब पाँच अङ्कले ओरालो लागेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने साढे पाँच अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से ५.५३ अङ्कले बढेर एक हजार १६७.९५ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.०६ विन्दुले बढेर २५३.३३ मा पुगेको छ । नेप्से बढेसँगै कारोवार रकममा वृद्धि भएको छ । कूल १७७ कम्पनीको १४..
काठमाडौँ, १३ पुस साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै पाँच अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.९९ विन्दुले ओरालो लागेर एक हजार १६२.४३ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९८ विन्दुले घटेर २५३.३९ मा पुगेको छ । नेप्से आरोलो लाग्दा कारोवार रकमसमेत घटेको छ । कूल १८१ कम्पनीको १५..
शनिबार, पौष ५, २०७६ साल
काठमाडौँ, ५ पुस अघिल्लो साता उकालो लागेको शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक यस साता भने निरन्तर घट्दो क्रममा रह्यो । साताभर कूल १७२ कम्पनीका शेयर कारोवार भए । दुई सातादेखि लगातार बढेको शेयरबजार तेस्रो साताको प्रारम्भमै भने ओरालो लाग्यो । साताभर कूल ६५ लाख २१ हजार ३४ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ७१ करोड ९९ लाख आठ हजार ७९२ मूल्यमा खरीद बिक्री..
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १३ दशमलव ७५ विन्दुले घटेर एक हजार १५४ दशमलव ११ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव १५ विन्दुले घटेर २५३ दशमलव ५२ मा पुगेको छ । कारोवारमा कूल १६६ कम्पनीको १३ लाख ७१ हजार १३४ कित्ता शेयर रु..
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३७ विन्दुले बढेको छ । साताभर नै बजारले उकालोको यात्रा तय गर्यो । कूल १७३ कम्पनीका ८२ लाख ५४ हजार ९३३ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८० हजार १९७ मूल्यमा खरिदबिक्री भए । कारोवारका आधारमा रु दुई अर्ब माथि पुगेको यो धेरै पछि हो । पछिल्ला..
काठमाडौँ, २६ मङ्सिर साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से ११.१७ अङ्कले बढेर एक हजार १७२.६४ पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४१ अङ्कले बढेर २५५.६० पुगेको छ । परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी आएको छ । आज कुल १६८ कम्पनीका २१ लाख दुई हजार ६१..
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । लगातार सुधारको दिशामा रहेको नेप्सेमा आज पनि २.४८ विन्दुले बढेर एक हजार १५१.३६ विन्दुमा पुगेको हो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.३३ विन्दुले बढेर २५३.५० मा पुगेको छ । नेप्सेमा सुधार देखिँदा त्यसको प्रभाव कारोबार रकममा समेत परेको छ । कूल १७० कम्पनीको १६ लाख ६१ हजार ८२८ कित्ता..
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । धेरै समयपछि नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १३.५१ विन्दुले बढेर एक हजार १४८.८९ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.६५ विन्दुले सुधार भई २५३.१७ मा पुगेको छ । नेप्सको उकालो यात्रासँगै कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको छ । कूल १७३..
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार सोमबार सामान्य गिरावट भएको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३.७५ अङ्कले वृद्धि भई एक हजार ११५.७४ पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.६३ अङ्कले बढेर २४६.३४ पुगेको छ । परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ । स्टकका अनुसार आज कुल १७२ कम्पनीका १० लाख १०..
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर आइतबार झिनो अङ्कले मात्रै वृद्धि भएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार ०.८६ विन्दुले घटेर एक हजार १११.९९ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४४ विन्दुले घटेर २४५.७१ मा पुगेको छ । नेप्से झिनो अङ्कले घटे पनि कारोवार रकम भने आइतबारको तुलनामा बढेको छ । आइतबार कूल १६१..
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक निरन्तर ओरालो यात्रामा नै छ । विगतमा राम्रो प्रतिफल दिएका कम्पनीको सूचक नै नकारात्मक भइरहेको बेला शेयर बजारमा एकैपटक ठूलो मात्रामा साधारण शेयर आउन लागेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने भने पनि विभिन्न १२ कम्पनीका करीब रु चार अर्ब ४० करोड ६५ लाख ५९ हजार ६०० बराबरको..
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । धितोपत्र बजार यस साता पनि उतार चढावपूर्ण रह्यो । बजारले समातेको ओरालोको लय यस साता पनि उस्तै अवस्थामा रह्यो । पाँच कारोवार दिनमा बुधबार मात्रै बजारले केही सुधारको सङ्केत गरेको भए पनि अन्य दिन नकारात्मक नै रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताभर कूल १६८ कम्पनीको शेयर कारोवार भयो । कूल ५१ लाख ५१ हजार २२७ कित्ता..
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर मङ्गलबार झिनो अङ्कले गिरावट आएको धितोपत्र बजारमा आज भने सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ८.३० अङ्कले वृद्धि भएर एक हजार ११७.४६ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.७४ अङ्कले बढेर २४७.२३ मा पुगेको छ । परिसूचक बढेपनि मङ्गलबारको तुलनामा कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । मङ्गलबार रु २९..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर सोमबार तटस्थ रहेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झिनो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ०.९१ विन्दुले घटेर एक हजार १०९.१६ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक भने आज ०.११ ले बढेर २४५.४९ विन्दुमा कायम भएको छ । नेप्से आरोलो लागे पनि कारोवार रकम भने सामान्य रहेको छ । कूल १६५..
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से १०.५४ विन्दुले घटेर एक हजार ११०.०८ विन्दुमा पुगेको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक २.०३ विन्दुले घटेर २४४.८६ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से घटेपनि कारोबार रकम भने औसतमा सीमित भयो । कूल १६२ कम्पनीको नौ लाख २९ हजार ७४४ कित्त शेयर रु २८..
काठमाडौँ, ५ मङ्सिर धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज ७.७४ विन्दुले घटेर एक हजार १२०.६० विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.७८ विन्दुले घटेर २४६.८९ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से ओरोलो लागे पनि कारोवार रकम भने औसतमा सीमित भएको छ । कूल १६७ कम्पनीको १० लाख ५० हजार..
Results 581: You are at page 1 of 20